လိင်မှတဆင့်အများဆုံးကူးစက်သောရောဂါအကြောင်း ကျွန်တော်လူတွေကို အသိပညာပေးပါတယ် - Hello Sayarwon
Dr. Thurein Hlaing Win မှ ရေးသားသည်။ 31/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကလေးသူငယ်များ HPV(လေးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး)မထိုးရသေးခြင်းသည်မိဘများကိုယ်တိုင် မသိသေးသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖြစ်ရန်ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဆရာဝန်များ၏ အကြံပြုချက်သည် အဓိက အခန်းမှ ပါဝင်သည်ဟုယူဆရသည့် အချက်အလက်များရှိသည်။ HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို မသိရှိရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ဆယ်ကျော်သက်လေးတို့ရဲ့ ဆရာဝန်များ သူနာပြုများက ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ရန် အကြံမပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတွေသတိမထားမိသော အချက်ကတော့ ေယာက်ျားလေးများလည်း မိန်းကလေးများလို HPV ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေဖြင့် HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများအား ရှင်းပြခြင်းဖြင့် ထိုးသင့်သော အသက်အပိုင်းအခြားရောက်နေသောသူတိုင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားဖြစ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်သင့်ပါသည်။
မိဘများအား HPV ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးအကြောင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းဘယ်လိုရှင်းပြသင့်သနည်း။
ဆရာဝန်များအနေဖြင့် ကလေးတိုင်း ထိုးသင့်သောကာကွယ်ဆေးများအကြောင်း မိဘများအားရှင်းပြလျှင် HPV ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းလည်း ထည့်ပြောသင့်ပါသည်။ ထိုအခါ မိဘများဘက်မှ မေးလာမည့် ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းနှင့် ဆေး၏ကောင်းကျိုးများအား ပြန်လည်ရှင်းပြရန် အတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။ သင့်ဘက်မှ ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာဖြင့် ရှင်းပြလျှင် သူတို့ဘက်မှလည်း သင်၏ အကြံပြုချက်များအား လိုက်နာချင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ခုသိထားသင့်သည်က HPVကာကွယ်ဆေးအား အခြားသော ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ခွဲ ခြားမပြောဘဲ ထိုးသင့်သော ကာကွယ်ဆေးများအကြောင်းပြောနေရင်းနှ့င် ကြားညှပ်ပြောသင့်သည်။ ဒီလိုလေး ပြောကြည့်ပါ။ “သင့်ကလေးသည် ဝက်သက် ၊ ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေးနှင့် HPV (သားအိမ်ခေါင်းကာကွယ်ဆေး ) အားထိုးသင့်သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် HPV ကာကွယ်ဆေးသည် အခြားကာကွယ်ဆေးများတန်းတူ အရေးကြီးကြောင်း နှင့်ကလေးများအတွက်လည်း အခြားသောကာကွယ်ဆေးများလိုထိုးလျှင် လုံးဝ စိတ်ချရကြောင့် မိဘများအား အသိပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ ကလေးများ၏ ကာကွယ်ဆေးမှတ်တမ်းများအားလည်း သေချာစစ်ဆေးပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ထိုးရန် ရက်စွဲကိုပါ တစ်ခါတည်းပြောပြရန်မမေ့သင့်ပေ။ တတ်နိုင်လျှင် ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည်နှင့် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးရန် ရက်ချိန်းအား ပြန်ချိန်းသင့်ပေသည်။
HPV ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပက်သက်ပြီး မိဘများ အမေးများသော မေးခွန်းများ
HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အကြောင်းနှင့် HPV ကာကွယ်ဆေး အကြောင်းအပြင် တစ်ခါတစ်ရံမိဘများသည် ဤကဲ့သို့ မေးနိုင်ပါသေးသည်။
၁။ မိမိတို့၏ကလေးမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အမှန်တကယ် လိုအပ်တာလား။
လိုအပ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးများပါ HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သည်။ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် မိန်းကလေး ယောက်ျားလေးမရွေးပါ။
၂။ အမှန်တကယ်ရော ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား။
ရှိပါတယ်။ ထိုးသင့်သောအသက်အပိုင်းအခြားထဲကသာ ထိုးထားလျှင် HPVကာကွယ်ဆေးသည် ထိရောက်မှု အရှိဆုံးဖြစ်ပြီး ဆေးအာနိသင်လည်း အချိန်ကြာကြာခံပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလျှင် လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက် ကြွက်နို့များပေါက်ခြင်းနှင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့် အခြားကင်ဆာများ ဖြစ်နိုင်ခြေအားလည်း လျော့နည်းစေပါသည်။
၃။ မိမိ၏ကလေးသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည်နှင့် လိင်ကိစ္စ ဆာင်ရွက်ရန်အဆင်ပြေပါ့မလားဟု သံသယဝင်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သနည်း ။
တွေ့ရှိချက်များအရ ကာကွယ်ဆေးသည် ကလေးများ၏ လိင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမထိခိုက်နိုင်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ပူရန် မလိုပေ ။ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ရမည့် လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက် ကြွက်နို့များပေါက်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများသည်သာ သင်စိတ်ပူရမည့် အရာများဖြစ်သည်။
၄။ HPV ကာကွယ်ဆေးသည် ကလေးမရနိုင်သော မြုံခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလား။
သုတေသီတို့၏ပြောကြားချက်များအရ HPV ကာကွယ်ဆေးနှင့်ကလေးမရနိုင်ခြင်းသည် ဆက်စပ်မှုမရှိပေ ။ သင့်ကလေးသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားလျှင်တော့ HPV ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီး မျိုးပွားအဂါၤများထိခိုက်၍ မြုံသော ရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြင်း ၊ နှင့် သေစေနိုင်လောက်သည် အထိဆိုးသော အခြေအနေများ တွေ့ကြုံနိုင်ပါသည်။
၅။ သင်သာမိဘတစ်ယောက်ဆိုရင်ရော သင့် ကလေးကို HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးခိုင်းမည်လား။
“လုံးဝသေချာတာပေါ့” ကျွန်ုပ်လို ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ကာကွယ်ဆေး အကြောင်း ဒီလောက်သိတာ ကိုယ့်ကလေးတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တာမြင်ရဖို့ သေချာပေါက်ထိုးခိုင်းမှာပါ။
Framing the Conversation With Parents About the HPV Vaccine.
https://www.medscape.org/viewarticle/827912_3 Accessed February 28, 2018.
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/for-hcp-tipsheet-hpv.html Accessed February 28, 2018.
HPV Vaccine Safety and Effectiveness. https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/safety-effectiveness.html Accessed February 28, 2018.
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းလေးများ